आङ सान सुकीमाथी ६ ओटा नयाँ आरोप – Makalukhabar.com
२०७७ चैत ३० गते १६:०७
याङ्गुन । म्यान्मारमा सेनाको ‘कू’पछि अपदस्थ गरिएका नागरिक नेता आङ सान सुकीलाई सोमबार नयाँ फौजदारी अभियोग लगाइएको उनका वकीलले जानकारी दिएका छन् ।
उनीमाथि ६ वटा थप मुद्दामा अभियोग लगाइएको छ । न्यापिटअ पाँच र याङ्गु एउटा मुद्दा लगाइएको उनका वकील मीन मीन सोले एएफपीलाई बताएका छन् । पछिल्लो आरोप मुलुकको प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन कानुनअन्तर्गत रहेको पनि वकीलले थप जानकारी दिएका छन् ।
म्यान्मारको उत्तरपूर्वी बगो सहरमा सैन्य शासनविरुद्ध भएको प्रदर्शनमा सेनाले प्रत्यक्ष बल प्रयोग गर्दा हिजोमात्र कम्तिमा ८० जनाको मृत्यु भएको थियो । म्यान्मारमा गत माघ १९ मा देशको शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सेनाको कारबाहीमा ६ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको छ ।
सेनाले निर्वाचनका बेला ब्यापक धाँधली भएको दाबी गर्दै आएको छ । उक्त चुनावमा आङ सान सुकी र उनको ‘नेसनल लिग फर डिमोक्र्यासी’ दल निर्वाचित भएको थियो । निर्वाचन आयोगले धाँधलीको उक्त दाबीलाई खारेज गरिदिएको थियो ।
कोरोनाबाट अति प्रभावित १५ देश, कहाँ कति संक्रमित ?
के कोभिड-१९ को नयाँ भेरियन्ट ‘डेल्टा प्लस’बारे विश्व चिन्तित हुनुपर्छ ?
भारतमा एकैदिन ८० लाखभन्दा धेरैलाई लगाइयो भ्याक्सिन